Gịnị bụ Semalt
Ahịa na Semalt
Nkwa nke Udo: Zute Otu; Hụ Oche Ndị Ahịa na Àmà Ndị ahịa
Semalt na ụwa
Eziokwu Abouttọ Banyere Semalt
Dị ka mmụọ ozi nke nnukwu na obere ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ndị nweere onwe ha, ndị ọchụnta ego na ọtụtụ ndị ọzọ nwere njikọ ntanetị. Semalt bụ ụlọ ọrụ dijitalụ nke na-enyere gị aka imezu nke ị na-enweghị ike ị nweta onwe gị site na mmesi obi ike nke afọ ojuju mgbe ọ bụla metụtara ihe ịga nke ọma nke azụmahịa gị.
Semalt na-enye ọrụ dị iche iche sitere na SEO pụrụ iche nke ma AutoSEO na FullSEO na nyocha Web, mmepe Web, yana mmepụta vidiyo. Semalt na-enye nkwado gị kwesịrị ekwesị maka azụmahịa gị ma na-enye gị nkwa nke ịga nke ọma 100% n'enweghị nchekasị.
Semalt bụ ụlọ ọrụ dijitalụ nke nwere ọnụnọ ụwa zuru ụwa ọnụ nke na - arụ ọrụ na ndị ama echekwabara ma nwee ikike na mpaghara niile na ngalaba nke ịchebe weebụ, ịzụlite web, ahịa na ngwaọrụ ndị ọzọ metụtara azụmahịa dị n'ịntanetị. Nweta ngwaọrụ dịka SEO — AutoSEO na FullSEO, Nchịkọta Weebụ, wdg. Ha na-ahụ na ahịa niile na ndị ahịa azụmaahịa chọrọ ka a na-elekọta ha nke ọma.
Azụmaahịa gị dị na mpaghara dị larịị ma ọ bụ na-ata ahụhụ site na okporo ụzọ weebụsaịtị na ndị ọbịa dị ala? Competition nwere asọmpi siri ike na-egbochi gị iru ọkwa dị elu na Google? Atụla egwu, Semalt dike gị nọ ebe a iji chebe gị na azụmahịa gị!
Semalt bụ ọkachamara SEO na ụlọ ọrụ na-azụmaahịa na-enye gị ọrụ enyere aka iji wepụ azụmahịa gị dị oke egwu ma dị mkpa yana nsogbu ahịa. Ọ na - eme nke a site na ọtụtụ ndị ọkachamara amaara ọkwa na ndị raara onwe ha nye nke na-etinye ihe ịga nke ọma azụmahịa gị karịa ihe ọ bụla ọzọ ma were azụmahịa gị gaa n'ọkwa dị elu.
Site na Semalt, ị guzoro irite uru dị ukwuu na ndị ọkachamara ya nwere ikike dị maka iji nyere aka na afọ niile. Companylọ ọrụ ahụ nwekwara ntụkwasị obi dị elu nke ndị ahịa dịka ndekọ ụlọ ọrụ ahụ nke ọrụ ndị ọzọ mejupụtara na-emebi ụlọ ọrụ karịrị 800,000 na ndị ọrụ 300,000.
Semalt na-enye ọrụ dị mma a na-apụghị ịgụta ọnụ n'oge ọnụego ezi uche dị ọnụ ma dị ọnụ ma ghara ichefu ego na-eju anya na oge ọ bụla iji tinyekwuo ọnụ ọchị na ihu gị.
Nke a na ọtụtụ uru ndị ọzọ ị guzo iji nweta mgbe ị họọrọ Semalt. Offọdụ n'ime ọrụ ndị a gụnyere:
Semalt lekwasịrị anya n'inye ndị ọkachamara SEO na ọrụ ahịa nke AutoSEO, FullSEO, Nchịkwa Weebụ, Mmepụta vidiyo, na Mmepe Weebụ.
Gịnị Bụ SEO - Search Ngini Nzipụta ma ọ bụ SEO dị ka a na-akpọkarị ya bụ atụmatụ ahịa weebụ na-etinye aka na usoro nke ịba ụba ma ogo na ogo nke okporo ụzọ weebụsaịtị ọ bụla. Ọ na - eme nke a site na ịba ụba visibiliti nke ndị ọrụ site na igwe nchọta.
Ọ bụ usoro inweta ọnya ikuku maka weebụsaịtị echere site na iji isiokwu echebere metụtara weebụsaịtị iji bulie ogo ya na igwe nchọta.
Usoro Semalt nke SEO Semalt kpuchitere ngalaba ọrụ abụọ nke AutoSEO na FullSEO:
AutoSEO - Semalt's AutoSEO bụ maka azụmaahịa na-amata ihe ịtụnanya SEO na nsonaazụ ya na ahịa.
Na AutoSEO, azụmahịa ndị a ka ewepụtara ọhụrụ nwere ike ịkwalite weebụsaịtị ha, melite visibiliti na ntanetị, na-adọta ndị ọbịa ọhụrụ ma na-abawanye ọnụnọ azụmahịa n'ịntanetị.
FullSEO- Semalt na-enye ndị na-ahụ maka ndị nchekwa na SEO atụmatụ zuru ezu. Ọ bụ maka azụmaahịa nwalere SEO ma chọọ ịgakwu ma nweta ọtụtụ ihe dị ka ROI dị mma ma na-aba uru, itinye ego n'ahịa n'ọdịnihu, na-enwe nsonaazụ ogologo oge ma na-agbasawanye ngalaba SEO ha.
Gịnị Bụ Nchịkọta Weebụsaịtị: nke a bụ atụmatụ azụmaahịa nke metụtara usoro dị mgbagwoju anya nke ịnakọta, ịkọ, na nyochaa data mkpokọta. A na-eji ya maka ebumnuche dị iche iche iji banye na weebụsaịtị iji chọpụta ọnụego ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke ebumnuche weebụsaịtị. A na-ejikwa ya iji nweta, ma kee atụmatụ iji hụ na ọkwa dị mma.
Nchịkọta weebụsaịtị na Semalt dị iche na ọrụ ndị ị na-ahụ ebe ọzọ. Nchịkọta weebụsaịtị Semalt na-enyere azụmahịa gị aka ịghọta ihe niile gbasara gburugburu ahịa ya, yana nyocha ahịa zuru oke nke na-ekpuchi nlekota nke weebụsaịtị gị, ọnọdụ onye asọmpi gị, wdg.
Ọ na - enyere ndị ahịa aka ịchọpụta ahịa na ahịa dị ọhụrụ yana ndị dị mma maka azụmahịa ahụ. Ọzọkwa, ọrụ ahụ gụnyekwara nyere ha aka ịgbanwe akwụkwọ niile dị mkpa na data gbasara azụmaahịa ahụ ka ọ bụrụ PDF na Excel.
Maka ọtụtụ ọrụ, o yikarịrị ka ị ga-atụ anya na ị ga-akwụ ụgwọ ya na ọnụahịa dị elu ga-akpagbu gị oge. Agbanyeghị, ọrụ Semalt dị oke ọnụ maka ọtụtụ mmadụ ma ọ bụ azụmaahịa.
Ọrụ Semalt niile na-abịa na ọnụ ahịa ndị ahịa na-akwụ ụgwọ nke bara uru na ọrụ ahụ ma na-enyere gị aka idobe akpa gị. Semalt na-enyekwa ego dị iche iche maka ụfọdụ ọrụ ha site n'oge ruo n'oge nye onye ahịa ya. Lelee foto dị n'okpuru ebe a ka ị hụ ụfọdụ ọnụọgụ dị.
Ndepụta ọnụahịa maka ọrụ Semalt
Semalt dị iche na ọtụtụ ụlọ ọrụ dijitalụ na-apụ na ya. Ọ bụ ụlọ ọrụ raara onwe ya nye ma bụrụ nke siri ike, Agencylọ ọrụ Digital Full-stack nke na-abụghị na-enye gị ịdị mma n'oge ọ bụla kama ọ na-enyekwa gị mmesi obi ike n'ihu nke ihe ịga nke ọma na-abịa.
Iji gosipụta ọkwa nke ntinye ya na nkwado ọfụma, ọ bụghị naanị ị ga-ezute ndị otu Semalt na weebụsaịtị, mana ị ga-ahụkwa ikpe ndị ahịa na-egosi ọkwa ha nke ọma n'ụzọ niile.
Zute ndị otu Semalt ma mara otu ha si arụ ọrụ.
Site na njedebe ha zuru ụwa ọnụ, Semalt na-etu ọnụ maka ịga nke ọma n'ọtụtụ ebe na ọtụtụ ndị ahịa na-aga nke ọma. Akaebe ndị a dị maka azụmaahịa ibe ha ka ha na-aga ka ha na-eche ikpe ịga nke ọma nke azụmahịa ha ka aga-egosipụta na weebụsaịtị Semalt.
Egosiputara ufodu ndi nwere ahia na akuko banyere ha nke oma dika esi hu na weebụsaịtị.
Semalt enweghị mgbochi niche, ọ nweghịkwa ihe mgbochi asụsụ. O nwere ọrụ dịịrị ndị niile nwere mmasị na ụwa niile. Meela onwe gị na ebe nrụọrụ weebụ Semalt gọọmentị na-enyocha akwụkwọ maka ikpe ndị ahịa na-aga nke ọma na Semalt.com
Ewezuga ikpe ndị ahịa na-egosi pasent mmụba nke azụmahịa ha nwetara mgbe etinyechara aka na Semalt. Enwekwara ọnụ ọgụgụ ịgba akaebe nke ndị ahịa na ndị ahịa na-ekerịta nkwupụta egwu ha banyere ihe ịtụnanya Semalt merela ahịa ha.
Ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịchọta akaebe vidiyo si n'aka ndị ahịa na weebụsaịtị Semalt, mana ị ga-ahụ ihe akaebe ederede edere na nyocha dị ukwuu site na Google na Facebook site n'aka ndị ọrụ Semalt denye aha na ụwa niile.
Site na United States ruo Vietnam, ruo Ireland, Semalt amataghị ókè. Nanị ihe na-eche bụ ime ka afọ ojuju n'ọtụtụ ndị ahịa ya ma tinye ọrụ ha n'ọrụ kacha elu.
Enwere ọtụtụ akaebe na-enweghị ike ịgwụ ike na otu ọkwa a. Iji leleekwuo biko gaa na websaịtị gọọmentị Semalt wee gụọ maka nyocha nke ọrụ Semalt site n'aka ndị akaebe.
N'okpuru bụ ụfọdụ akaebe edere nke ị ga-ahụ na weebụsaịtị Semalt:
Semalt Na .wa
Na-echegbu onwe gị banyere ọnọdụ gị ma na-eche ma Semalt nwere ike ijikwa mmekọrịta gị na obodo ọzọ, ụjọ anaghị atụ maka Semalt ka ikpuchiri, n'agbanyeghị ọnọdụ gị.
Ndị ọrụ Semalt bụ ndị ọkachamara na ọtụtụ asụsụ. Ha maara nke ọma n'asụsụ mba ụwa, dịka, Bekee, French, Portuguese, Turkish, Italian na ndị ọzọ. Ya mere, ị ghaghi ichegbu onwe gị banyere ihe mgbochi asụsụ mgbe ị na-atụle iwere ọrụ Semalt maka azụmahịa gị ma ọ bụ weebụsaịtị.
Youmaara na akara Semalt bụ akwụ?
Youmaara na Turtle bụ akara eji atụ ahịa na Semalt ọ bụghị dịka akara nke ụlọ ọrụ ahụ kamakwa dị ka ụlọ ọrụ ahụ si nwee nturu anụ a na-akpọ Turbo nke bi na ọfịs Semalt niile ma na-arụkwa ọrụ dị ka onye na-agba ndị ọrụ nyocha na Turbo?
Zute Turbo The Turtle
Wezụga ọrụ dị elu nke ụlọ ọrụ a na-enye; ọnụ ọgụgụ nke ndị ahịa na-ahụ maka ọnụ ahịa na nnukwu ịgba akaebe nke ndị ahịa sitere n'ụwa niile na-ekerịta akụkọ ihe ịga nke ọma ha na Semalt, a ka nwere ọtụtụ ihe gbasara Semalt.
Semalt dị ka otu ụlọ ọrụ kwenyere na ike ịde blọgụ ma nwee blog dị ike iji soro ndị ahịa na ndị ọrụ ya na-emekọrịta ihe.
Semalt Blog dị na ebe nrụọrụ weebụ ya, nweekwa ọtụtụ posts blog metụtara azụmahịa dị na ntanetị, ngwaọrụ ntanetị n'ịntanetị na ubi ndị ọzọ metụtara. Edemede blọgụ ndị a bụ ndị ọkachamara n'ọhịa, ndị dị njikere ịkekọrịta ihe ọmụma ha, ma nye nghọta zuru ezu banyere isiokwu dịgasị iche iche metụtara SEO Marketing.
Offọdụ n’ime blọọgụ ị ga-ahụ na Semalt Blog gụnyere:
SEO vs PPC - Kedu onye ga-eji kpoo nnukwu?
Etu esi emebe akwukwo Google Business na Brush It Up?
Tzọ Mgbalị-Ezigbo Ezi Nyefee Weebụsaịtị Iji Chọọ Mmezi | Semalt
18 Ngwaọrụ kachasị mma SEO kachasị mma iji meziwanye ọkwa gị | Semalt
Kedu ihe na-eme ka profaịlụ Backlink Profaili Dozie?
A na-enweta ọtụtụ ndị ọzọ ngwa ngwa na weebụsaịtị. Readinggụ akwụkwọ ndị a nwere ike inye gị nghọta miri emi na atụmatụ ndị ọzọ iji zụlite azụmahịa gị.
Can nwekwara ike ịnweta ndụmọdụ gbasara SEO na weebụsaịtị Semalt. A haziri ndụmọdụ ahụ iji nyere ndị ọrụ oge mbụ, yana ndị ahịa ochie aka ịchọpụta okwu SEO saịtị ha ma bulie ọrụ ha.
Site na ya, ndị ahịa nwere ike ịnwe nghọta ka mma banyere ihe ha chọrọ, yana ụdị ọrụ ha ga-azụta na Semalt.
Ndị ahịa azụmaahịa niile dị n'ịntanetị, ndị nweere onwe ha, ndị webmaster na ndị ọzọ nọ n'ụwa niile na-achọ ihe ga-eme ka etu esi etolite weebụsaịtị ha, Semalt bụ ụzọ aga. Ha na-enye weebụsaịtị wepụtara ma rụọ ọrụ, site na iji ngwa ahịa dị iche iche iji kwalite visibiliti na njikọ aka. Semalt bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa zuru oke nke nwere ndị ahịa ya dị ka ihe kacha mkpa, yana ọtụtụ ihe ịga nke ọma na mmeri iji gosipụta ya.